မတ်လ 2020 - tgMember
ကြေးနန်းဗိုက်ကင်း Feature ကို: ရွေးချယ်ထားသောအုပ်စုတစ်စုသွင်းကုန်အစစ်အမှန်မဆိုအုပ်စုတစ်စုသို့အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်ချန်နယ်ကနေအစစ်အမှန်အသုံးပြုသူတင်ပို့သာလျှင်သင့် Group မှ ID သို့မဟုတ် Channel ကို ID ကိုလိုအပ်တယ် [...]
ကြေးနန်းပေးပို့သူအော်တိုအောက်ခြေ Feature ကို: ကြေးနန်းပေးပို့သူ 2020 ကြေးနန်းနံပါတ် Filter ကိုအပြည့်အဝကြေးနန်း Update ကိုအပြီးအလုပ်လုပ်. အဘယ်သူမျှမ Capping, filter ကို Unlimited နံပါတ်များ. သင်တို့ရှိသမျှသည် Filter နိုင်ပါတယ် [...]
ကြေးနန်းသူဌေးကအင်္ဂါရပ်များ: မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ပိုတစျခုအကောင့်ထက်မှတ်ပုံတင်မည်. ကြေးနန်းထဲမှာမှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကိုသိရန်ဒေတာများကိုစစ်ထုတ်. အတွင်းမက်ဆေ့ခ်ျထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Send [...]